Hetsika Rohy - Drafitra vaovao no ho tanterahina mandritra ny 5 taona ho avy
Hetsika Rohy – Drafitra vaovao no ho tanterahina mandritra ny 5 taona ho avy
Publié avril 11, 2022 par Book News
« Malagasy miaina ao anaty Madagasikara tsara tantana, marina ary miroborobo », io no vinan’ny hetsika Rohy ho an’ny taona 2022-2026. Novelabelarin’izy ireo ny 7 avrily 2022 ny mikasika ny drafitra vaovao entina miasa mba hirosoan’i Madagasikara ho demokratika ary hahafahan’ny mponina ao aminy mahafantatra ny zony sy andraikiny.
7 taona tao aorian’ny nitsanganan’ny hetsika Rohy, mitohy ny asa. Nandritra ny taom-pikatrohana, tsapan’ny fikambanana fa mbola maro ny lesoka mila arenina, indrindra nampian’ny fandalovan’ny aretina Covid-19, ny rivo-doza nifanesy farany teto Madagasikara. Etsy andaniny, hita ny tsy fahampian’ny fandraisana anjara mavitrika, ny fahosana eo amin’ny lafiny fifandaminana sy ara-tekinika, eny fa na dia teo aza ny atrikasa natao isam-paritra sy ireo fifampizarana maro niarahana tamin’ny mpandray anjara samihafa, araka ny voalazan’ny tompon’andraikitra teo anivon’ny fikambanana. Fanamby fototra ho an’ny taom-pikatrohana manaraka ny fanorenanana « fiarahamonim-pirenena voarafitra tsara, matanjaka ary mpilalao fototra ho an’ny fampandrosoana maharitra an’i Madagasikara ».
Vina lavitra ezaka
Nanapa-kevitra izy ireo fa hiroso haingana kokoa ho amin’ny fanatratrarana ny tanjona, ka izany indrindra no antom-pisian’ity drafitra vaovao ity. Mizara roa mazava tsara ny fomba enti-miasa. Voalohany, ezahana ny ampikambanana ireo sehatra, federasiona, fikambanana na vondrona tsy miankina mba hifanome tanana amin’ny hetsika ataon’ny fiarahamonim-pirenena. Faharoa, hamafisina ny fahaiza-manao ary ny fanoloran-tenan’ny fiarahamonim-pirenena Malagasy mba hahomby amin’ny fampivoarana, ny fampiharana ary ny fanaraha-maso ny politikam-panjakana.
Madagasikara lavitry ny kolikoly, isany tanjona goavana andrandraina amin’ity drafitra stratejika novolavolaina ity. Araka ny fanoroam-panafoanana ny kolikoly, mbola laharana faha 149 amin’ny firenena 180 i Madagasikara. Nampahatsiahivin-dRazakamarina Ndrato, Filohan’ny ONG SAHA, tao amin’ny lahateniny omaly fa « anisan’ny manana andraikitra lehibe amin’ny fampandrosoana ny nosy ny fiarahamonim-pirenena, ary ilaina isika rehetra miara-mientana ka hiady amin’ny ireo sakana mampikatso, isan’izany ny kolikoly, izay mety ho hita eo amin’ny sehatra rehetra misy antsika ».